November 2020 - 7DAY THADIN
မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဆင်းရဲတွင်းထဲ ရောက်သွားစေတဲ့ အချက် (၃၇) ချက်
မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဆင်းရဲစေတဲ့ အချက် (၃၇) ချက်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေ တကယ် မှန်၊ မမှန် ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး ခင်ဗျာ- (၁) မြန်မာအများစုက (TEAM WORK) အားနည်းတယ်။ မညီညွတ် ဘူး။ (၂) ဘေးကနေ သွေးခွဲရ လွယ်တယ်။ (၃) မနာလိုစိတ် များတယ်။ (၄) အချင်းချင်း …
မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဆင်းရဲတွင်းထဲ ရောက်သွားစေတဲ့ အချက် (၃၇) ချက် Read More
ငယ်ကတည်းက အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ မျောက်ကလေးက လျှပ်စစ်ကြိုးကိုင်မိတာကိုမြင်တော့ ဘဲလေးကပြေးကူညီရင်းနဲ့ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့ရတဲ့အဖြစ်
ငယ်ကတည်းက အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ မျောက်ကလေးက လျှပ်စစ်ကြိုးကိုင်မိတာကိုမြင်တော့ ဘဲလေးကပြေးကူညီရင်းနဲ့ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့ရတဲ့အဖြစ် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူတူကြီးလာတာတဲ့ ဒီမျောက်လေးနဲ့ဘဲလေးက မျောက်လေးကလျှပ်စစ်ကြိုးကိုကိုင်မိပြီးဓာတ်လိုက်တော့ ဘဲကပြေးလာပြီးကူညီပေမဲ့ဓာတ်လိုက်တာဆိုတော့၂ကောင်လုံးသေသွားကြတယ်။ ပိုင်ရှင်လည်းငိုလို့ ဘေးနားကနေ သံယောဇဉ်ဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်တွေမှာလည်း ရှိကြတယ်။ ခရက်ဒစ် Unicode ငယျကတညျးက အတူကွီးပွငျးလာတဲ့ မြောကျကလေးက လြှပျစဈကွိုးကိုငျမိတာကိုမွငျတော့ ဘဲလေးကပွေးကူညီရငျးနဲ့ဇာတျသိမျးမလှခဲ့ရတဲ့အဖွဈ ငယျငယျလေးကတညျးက အတူတူကွီးလာတာတဲ့ ဒီမြောကျလေးနဲ့ဘဲလေးက မြောကျလေးကလြှပျစဈကွိုးကိုကိုငျမိပွီးဓာတျလိုကျတော့ ဘဲကပွေးလာပွီးကူညီပမေဲ့ဓာတျလိုကျတာဆိုတော့၂ကောငျလုံးသသှေားကွတယျ။ ပိုငျရှငျလညျးငိုလို့ ဘေးနားကနေ သံယောဇဉျဆိုတာ …
ငယ်ကတည်းက အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ မျောက်ကလေးက လျှပ်စစ်ကြိုးကိုင်မိတာကိုမြင်တော့ ဘဲလေးကပြေးကူညီရင်းနဲ့ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့ရတဲ့အဖြစ် Read More
မြစ်​ထဲကိုခုန်ချဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာ ​ရေထဲမှာမိကျောင်းရှိနေတယ်ဆို​လို့ စိတ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့ဟုသိရ
November 28, 2020 November 3, 2021 - by admin
မလေးရှားနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ရေထဲကို ခုန်ချဖို့ ကြံစည်ခဲ့ပေမယ့် အကြံအစည် ပျက်ခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးကိုဘေးကလူတွေကဝိုင်းဝန်းဖြောင်းဖျလို့ အကြံအစည်ပျက်ခဲ့ရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် တမ်းက ခုန်ချတဲ့အထိစိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနီးအနားမှာမိကျောင်းတစ်ကောင်ဟိုဟိုသည်သည်ကူးနေတာကို မြင်ပြီးနောက် ကြောက်လန့်တကြားပဲနီးရာကမ်းစပ်ဆီကို တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့ ရေအမြန်ကူးခဲ့ရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာကတည်းကသူမတကယ် မသေချင်သေးဘူးဆိုတာ သေချာသွားတာပါတဲ့။အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်လို့ သိရပါတယ်။ အမည်ကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်း …
မြစ်​ထဲကိုခုန်ချဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာ ​ရေထဲမှာမိကျောင်းရှိနေတယ်ဆို​လို့ စိတ်ကူးပြောင်းသွားခဲ့ဟုသိရ Read More
ခေတ်ကာလ တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေပါ ပြောင်းလဲကုန်ကြပါတယ်….မိတ်ကပ်ကြောင့် မိန်းကလေးတွေ ကလည်း ပိုပိုလှလာသလို..တဖက်မှာလည်း သနပ်ခါးဆိုတာပျောက်ကွယ်ကုန်ပါတယ်တချို့မိန်းကလေးတွေက ဆံပင်တွေဆေးဆိုး အတိုညှပ်ပြီး ကိုရီးယားမလေးတွေလို ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမယ့် ရွာက မိန်းကလေး တွေက တစ်ရွာလုံးနီးပါး မြန်မာဆန်ဆန် ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြတာပါ….မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ် ပျားစည်ရွာက မြန်မာ မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ရွာလုံးနီးပါး …
တစ်ရွာလုံးနီးပါး ရှိသမျှမိန်းကလေးတိုင်းလိုလို ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ရွာ Read More
ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာ နတ်တွေခင်းထား​သော နတ်လမ်းရှိတဲ့ ကျိုက်နဲရေလယ်ဘုရား
(ကျိုက်နဲ ရေလယ်ဘုရား) နတ်တွေခင်းထားတဲ့ နတ်လမ်းရှိတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရေလယ်ဘုရား (မျှဝေခြင်းပါ)။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကာတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ထူးခြားအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စေတီပုထိုးတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲမှာယနေ့မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ဝဲကလောင်းရွာအနီးက ကျိုက်နဲရေလယ်ဘုရားကိုကံကောင်းစွာဖြင့် ဒကာဒကာမတွေ ပို့ပေးလို့ဖူးခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ ဒီကျိုက်နဲ ရေလယ်ဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင် ရေလယ်ဘုရားတွေအထဲမှာတော်တော်ကြီးဝေးတဲ့ ပင်လယ် အနက်ထဲမှာတည်ထားတဲ့ဘုရားလို့ပြောရမှာ။ ကျိုက်နဲရေလယ်ဘုရားကြီးရဲ့ ထူးခြားအံ့ဖွယ်ကောင်းတာကတော့ ပင်လယ်ထဲ ၌ ဘုရားရောက်သည်အထိသူ့ဘာဝအလိုလို ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကျောက်ချောခင်းထားတဲ့ နတ်လမ်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနတ်လမ်းကြီးဟာ …
ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာ နတ်တွေခင်းထား​သော နတ်လမ်းရှိတဲ့ ကျိုက်နဲရေလယ်ဘုရား Read More
သစ်တံခါးဆရာတော်၏ ဘယ်နေ့ သား/သမီးမဆို လာဘ်ပိတ်၍ စိတ်ညစ်နေပါသလား…?
မိမိ မွေးနေ့ ၏ နံနက်ပိုင်း ၉:၄၅ မိနစ် (သို့ ) ၁၀:၁၀ မိနစ် တွင် ဆောင်ရွက်ရပါမည် ။ ထူးခြားစွာ လ်ာဘ်ပွင့်၍ ငွေရွှင်စေနိုင်ပါသည်။ ပြုလုပ်ရန်… ကြေးအိုး (သို့) အောင်အိုး (သို့) မြေအိုးပတ်လည်တွင် ” စ,ဓ,ဗ,ဝ.. အောင်.. လာဘ်ရွှင်စေ ငွေဝင်စေရန် ကင်းစေ အောင်မြင်စေဟု ရေးပါ။ဈေးဆိုင် …
သစ်တံခါးဆရာတော်၏ ဘယ်နေ့ သား/သမီးမဆို လာဘ်ပိတ်၍ စိတ်ညစ်နေပါသလား…? Read More
သစ်ပင် ပန်းမန်ဆိုတာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။ မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင် ခြံ ထဲ၊ အိမ် ဝန်းထဲမှာ အပင်တွေ စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရွှင်လန်းစေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လို့ ရှေးမြန်မာအယူအရ မိမိ အိမ်၊ ခြံ ထဲမှာ မစိုက်အပ် ၊ မရှိသင့်တဲ့ အပင်တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ သိပ္ပံခေတ်ကြီးထဲမှာ …
မိမိအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ Read More
အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုး၇င်… ဗဟုသုတ အနေနဲ့ပါ။အိမ်ရှိလျှင် အိမ်မြှောင်ဆိုတာ ရှိတတ်စမြဲ။သူ့ စုတ်ထိုးသံ ကြားရတတ်စမြဲ။အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကိုလည်း လူတွေ အတိတ်ကောက်ကြလေ့ ရှိတတ်ကြရဲ့။ ဘာကြောင့် အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးပါသလဲ။အိမ်မြှောင် စုတ်ထိုးခြင်းဟာ နတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတတ်ကြောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ မိဘနဲ့သားသမီး ဆရာနဲ့တပည့် လင်နဲ့မယား ဆက် ဆံရေးမှာ လိုက်လျောမှုမရှိခဲ့လျှင် တကျက်ကျက်ဖြစ်ပြီး ကျက်သရေမင်္ဂလာလည်း ပျက်တတ်တယ် ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်စောင့်နတ် အိမ်စောင့်နတ်တွေ နားမခံသာ။ကံထိန်းနတ် …
အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးခြင်းအ​ကြောင်း သိကောင်းစရာ Read More
ကြမ်းပိုးဆိုတာ နီနီရဲရဲ ဗိုက်ဖောင်းဖောင်းနဲ့ လူတွေရဲ့သွေးကိုစုပ်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ သွေးစုပ်ကောင်အသေးစားလေးတွေပါ။ သူတို့ကို မိလို့သတ်လိုက်မိပြန်ရင်လည်း အနံ့က ဆိုးပါဘိခြင်း၊ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေး၊ ကြမ်းပိုးသွေးကို တစ်နေရာရာမှာသုတ်လိုက်မိရင် အဲ့သွေးအနံ့ရတဲ့နေရာကိုအခြားကြမ်းပိုးတွေကလာ အိမ်လုပ်၊ ဥတွေဥ နေထိုင်ပေါက်ဖွားကြနဲ့ တော်တော်လေးကိုအန်ချင်စရာ စိတ်ဆင်းရဲစရာ ကပ်ပါးသတ္တဝါလေးတွေပါ။ အကောင်သေးသေးလေးတွေမို့ အထင်မသေးနဲ့ တစ်ပတ်အတွင်းကြီးလာကြတာဗျား။ ရေထဲချရင်လည်းမသေ၊ အကြာကြီးသွေးမသောက်ရရင်လည်း ဖြူဖျော့ပြားကပ်နေတာကလွဲလို့ သူတို့ကတော့နေသာသာပဲ ၊သွေးနည်းနည်းသောက်လိုက်ရတာနဲ့ ချက်ချင်းကို စိုပြေဝဖြိုးပြီး နဂိုနေအပျိုရည်ပြန်ဖြစ်လာကြတာကိုး။ …
ကြမ်းပိုးကင်းစင် ပြုံးပျော်ရွှင်ဖြစ်စေဖို့ ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကြမ်းပိုးတွေကို ဘယ်လိုတိုက်ထုတ်ကြမလဲ Read More
စစ်ကိုင်းတောင် တစ်ဖက်ကမ်းကရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရားတွေဖြစ်ပြီး ဒီဆုတောင်းပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ ရွှေကြက်ယက်စေတီအတွင်းမှာ ရှိပါတယ် အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်… မည်သည့်မင်းညီမင်းသားမှ မဖူးရလို့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ပြီး အစာင့်တွေချထားကာ သော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ရှေ့ကို တနေ့ကရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်တာနဲ့ .. အို … သပ္ပါယ်လိုက်တာ လို့ ပါးစပ်က ရောင်ရမ်းပီး ထွက်သွားမိတဲ့ အထိပါပဲ တကယ့်ကို ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းသွားအောင် သပ္ပါယ်လိုက်တာ..စပါယ်နဲ့ …
အရမ်းကို ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ မင်းညီ မင်းသားတွေ မဖူးရဟု အမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ် အကြောင်း Read More